घोराही । तीन किशोरी पानीमा डुबे भनी घोराही मसिनाको कुइनेमा हल्लीखल्ली भयो। आइतवार सा“झ पर्दै थियो दिनभरि धान रोपेर थकित किशोरीहरु अमृता विक, झरना विक र बसन्ता विक शरीरभरीको हिलो पखाल्ने र घर फर्कने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। रोपाइ“ गरेको खेत नजिकै…
बलात्कार पीडित : पीडकलाई साजय पीडितलाई के ?
घोराही । ०७३ साल माघ १५ गते १४ वर्षीया बालिकालाई ३५ वर्षीय बाबुले बलात्कार गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा माघ २३ गते जाहेरी प¥यो । पीडित बालिकाले बयानका क्रममा आफ्नो कथा व्यथा सुनाएपछि प्रहरी स्वयं स्तब्ध भए । पीडक…
रोकिएन सानै उमेरमा हुने विवाह
प्युठान । गिरीराज कार्की अहिले ३७ वर्ष पुग्नुभयो । गौमुखी गाउँपालिका वडा नं. ३ बस्ने उनलाई आफ्नो विवाह गरेको भर्खर जस्तै लाग्छ । २२ वर्षको उमेरमा विवाह गर्दा उनकी श्रीमती सीताकुमारी खड्का १६ वर्षकी थिइन् । यी दम्पत्तीको तामझामकासाथ मागी…
समरेखा डेस्क । उद्यम तथा व्यवसाय, रोजगारी, आर्थिक, कानुनी अधिकार र निर्णयमा नेपाली महिला अझै पछाडि रहेको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंकले २०७५ फागुन १५ गते सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सूचकांकअनुसार नेपालका महिलाहरूले ५३.१३ अंक प्राप्त गरेका…
माण्डवीमा ‘सुत्केरी टेवा’ कार्यक्रम
सागर रिजाल प्युठान । माण्डवी गाउँपालिकाले संस्थागत सुत्केरी बढाउन ‘सुत्केरी टेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ को साउन महिनाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरी गाउँपालिकाले सुत्केरी टेवा कार्यक्रम…
बलात्कारको कसुरमा १५ वर्ष कैद
दाङ । १३ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसूरमा जिल्ला अदालत दाङले घोराही उपमहानगरपालिका–१८ का २३ वर्षीय रामलाल विकलाई १५ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले शुक्रवार कसूरमा दोषी ठहर गर्दै विकलाई १५ वर्ष कैद र…
घोराही, दाङ । पुरुषको आवश्यकतासँग जोडिएको कण्डम निःशुल्क हुने तर, महिलाका लागि नभै नहुने स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने ? अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ । धेरैजसो अधिकारकर्मी तथा नारी समानताका लागि काम गर्दैआएका संघसंस्थाले यो विषयलाई महत्वका साथ…
देउखुरी दाङ । पाँच वर्षअघि पेटीमा सानो किराना पसल शुरु गरेकी गीता अहिले सफल उद्यमीको रुपमा चिनिएकी छन् । लमही नगरपालिका ८ निवासी गीताले तिहारमा टीका लगाएर पाएको दक्षिणाको पैसाबाट किराना पसल शुरु गरेकी थिइन् । एक हजार पाँच सय रुपैयाँ…
बेसहाराको सहारा बन्यो हाते होजियारी
‘सरस्वती एउटा स्वेटर बुनि देउ न ।’ मैले जवाफ पाएँ, ‘यो साल त भ्याउँदिन अर्काे साल बुनि दिए हुन्छ ? त्यही प्रश्न अर्की अनितालाई सोधें, उनीबाट पनि त्यही जवाफ आयो । अरु दुईजनासँगै साेंधे सबैबाट एउटै जवाफ आयो । स्वीटर…
विभेद अन्त्य गर्ने संकल्प
दाङ । महिलामैत्री लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रतिवद्धतासहित पाँच नम्बर प्रदेशस्तरीय महिला मञ्च दाङमा सम्पन्न भएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा तीन दिनसम्म चलेको महिला मञ्च ६ बुँदे घोषणापत्र तथा ७ बूँदे आचारसंहिता बनाउँदै सम्पन्न भएको…